Ubucwebe bokunxiba ngengubo emnyama (Ngalo naliphi na ixesha) - Malunga Izacholo
Ubucwebe bokunxiba ngengubo emnyama (Ngalo naliphi na ixesha)
Njengoko ulungiselela ukuphuma ubusuku obuzayo edolophini okanye umcimbi oqhelekileyo, usenokuzibuza ukuba zeziphi izacholo ezifanelekileyo kwilokhwe emnyama. Ngokubanzi, xa kufikwa kuthelekisa isinxibo esimnyama esincinci (i-LBD), phantse nantoni na iyahamba!
ungayifumana njani inkawu njengesilwanyana sasekhaya
Ubucwebe obufanelekileyo bengubo eMnyama
Kwiimeko ezininzi, ungasebenzisa izincedisi ukutshintsha isimbo kunye nenqanaba lendlela yengubo emnyama, yiyo loo nto kubaluleke kakhulu ukunika ukhetho lwakho lobucwebecwecwe olubafaneleyo. Kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uziqwalasele xa ukhetha ubucwebe obunxiba i-LBD yakho.
Ubucwebe besinxibo esimnyama: Izimvo ezili-14 zokuma ngaphandle
Yenza iMfashini ukuba yonwabe kunye neefoto zeJewith Johnson zeJewellery
Iingcinga zeZipho zeZacholo zokuBonisa uKhathalelo
I-LBD inokukubona ngomhla oqhelekileyo okanye kwitheko elimiselweyo. Konke kuza ezachachweni.
Ngezihlandlo ezingaqhelekanga, njengesidlo sasemini kunye nabahlobo okanye usuku lokuzalwa losapho, kungcono ukunxiba i-LBD yakho phantsi komqala weqokobhe okanye amacici alengisiweyo e-bohemian. Unako ukufumba kwiibhengele kunye nokufaka amakhonkco eendleko zokuzonwabisa ngokungaphezulu.
Xa kuziwa kwiminyhadala engaqhelekanga, njengepati yomhlala-phantsi okanye umhla wesidlo sangokuhlwa, khetha izacholo zomqala ezihonjisiweyo, izacholo ezinxitywayo, namakhonkco esinyithi.
Kumsitho osesikweni ngakumbi, njengomtshato okanye umsitho womtshato omnyama, yongeza nje ukukhanya. Cinga ukunxiba ubucwebe obucikizekileyo okanye ubucwebe beendleko zokunyusa umgangatho wenqanaba lokujonga kwakho. Unokuqwalasela ipini ebengezelayo okanye isongo esilula.
Phantse yonke into ihamba nomnyama, sesinye sezizathu eziphambili zokuba ii-LBD zinxibe kangaka.
Ezinye ii-hues zakudala, ezibomvu, ezimhlophe kunye ne-tan, zisebenza kakuhle ne-LBD yakho. Imibala etyebileyo, njenge-fuchsia, ukukhanya kwelanga etyheli kunye ne-cobalt eluhlaza okwesibhakabhaka, nayo ijongeka intle.
Ngokwezinyithi, isilivere kunye negolide zenza i-chic kunye nobuhle obuphezulu.
Nangona kunjalo, kukho imibala ethile engasebenziyo. Njengomthetho, licebo elilungileyo ukunqanda ukunxiba ubucwebe obunombala oluhlaza okwesibhakabhaka okanye omdaka xa unxibe iimpahla ezimnyama. I-hues ehlanjiweyo nayo ayiyincedisi i-LBD, kuba ibukeka mnyama kakhulu kubo.
Umqala wengubo yakho uya kunciphisa ukhetho lwakho lobucwebe. Sebenzisa ezi zikhokelo ukukhetha awona mqala mhle kakhulu kwilokhwe yakho yokunxiba:
Isikwere okanye i-scoop neckline ijongeka intle ngeendlela ezahlukeneyo. Ngalo lonke ixesha qiniseka ukuba intsimbi yakho yomqala inde okanye imfutshane kunomqala wengubo ukuze ukhuthaze iiasethi zakho.
Izambatho ezingenazintambo zihlala zikhangeleka ngcono ngeentsimbi ezimfutshane ezinje ngee-chokers.
Iifreyimu ezimilise ngo-V zikhangeleka zibukeka kakhulu ngezithandelo, kuba zihlala zithambekele kwi-v-neck.
Ukuba isinxibo sakho esimnyama sibonisa ubuhlalu, ii-sequins, okanye enye into yokuhombisa, kungcono ukugcina ubucwebe bakho bulula.
Ncamathela kumbala omnye wezinto ukuba uza kukhazimla ngokupheleleyo. Ukuhonjiswa kwengubo kufanele ukuba kugxile kwinkangeleko yakho.
Unokujonga isongo esisisiseko, amacici e-hoop okanye iringi engaphantsi. Nangona kunjalo, zama ukunqanda ukuba nezinto zokuhombisa ezingaphezulu kwesibini njengoko oku kuqala ukujonga kakhulu nge-LBD yakho esele ikrelekrele.
Uhlobo lomzimba lolunye uqwalaselo olubalulekileyo xa ucinga ukuba zeziphi izacholo ezifanelekileyo kwilokhwe emnyama.
Khetha ubucwebe obuzalisayo, endaweni yokugxininisa, uhlobo lomzimba wakho. Ukuba u-curvy, ungahamba neziqwenga ezikhulu, ezimileyo. Ingxelo yomqala, ngakumbi, iya kutsala umdla kude nesifuba sakho ukuba uyaphazamiseka.
Ukuba unayo intamo encinci, ungayiginyi ngeentsimbi ezinkulu ezinamandla. Izinto zobucwebe zinokubonakala zinzima kwisakhelo somzimba esincinci, ke ngoko khetha ukhetho oluhle, olunomdla olunokuncipha.
Ukongeza, imixokelelwane emide ijonge ezona zintle kwabasetyhini abade, njengoko benokunciphisa ubude kude nomzimba wakho.
Ukufumana ubucwebe obuchanekileyo kwi-LBD yakho
Into enhle malunga neeLBD kukungafani kwabo. Ungonwaba ngezinto zakho kunye nezacholo kuba awuzukufuna ukuzikhathaza ngokuhambelana nombala othile wengubo. Cinga ngesi sihlandlo kwaye udibanise kwaye uthelekise iindlela ezahlukeneyo ukuze ufumanise ukuba yintoni esebenzayo uhlobo oluthile lomzimba kunye nesimbo sakho-kwaye ayizukuthatha ixesha elide ngaphambi kokuba ukhubeke kwindibaniselwano egqibeleleyo.
Herbal Unyango Ukwaluphala Nje Imiba Iitattoos Izilayidi Njani Oku Sebenzisa Makeup Iifashoni Tips Zabafazi
usuku lweetattoos lukakayi olufileyo
ngaba iikati ezingamadoda zingena kubushushu
imisebenzi yeqela lolutsha ngomyalezo
yeyiphi imibala onokuyihlamba kunye
yintoni iwayini elungileyo enencasa